Air Canada na-ebupụta ọrụ ọhụụ na-enweghị nkwụsị n'etiti Montreal na Kelowna
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada » Air Canada na-ebupụta ọrụ ọhụụ na-enweghị nkwụsị n'etiti Montreal na Kelowna
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Routezọ ọhụụ a na-agbakwunye mmetụta dị oke mkpa Air Canada nwere na akụ na ụba mpaghara yana nke mpaghara British Columbia n'ozuzu ya.
Ugboro ise ugbo elu na-akwụsịghị izu n’etiti Montreal na Kelowna.
Linegbọ elu jikọtara Ndagwurugwu Okanagan nke BC na ụgbọ elu na-enweghị nkwụsị na mpaghara anọ dị iche iche nke Air Canada: Montreal, Toronto, Vancouver na Calgary.
A ga-eji ụgbọelu Air Canada na-arụ ọrụ mmanụ ụgbọ elu Airbus A220-300 n'ụzọ.
A na-eme ụgbọ okporo ụzọ ụgbọ ala kachasị ọhụrụ nke Air Canada na naanị otu ọrụ na-enweghị nkwụsị n'etiti Montreal na Kelowna na Kelowna International Airport taa. Gbọ elu a na-arụ ọrụ ugboro atọ kwa izu, na-abawanye ugboro anọ na etiti July na ugboro ise n'August. A ga-eji ụgbọ elu Air Canada A na-eji mmanụ ụgbọ elu nke Airbus A220-300 gosipụtara klas azụmaahịa na ọnụ ụlọ akụ na ụba na ụzọ.
Routezọ ọhụrụ a na-agbakwunye mmetụta dị mkpa Air Canada nwere na akụ na ụba obodo na nke mpaghara British Columbia dị ka ihe niile. Tupu ọrịa na-efe efe COVID-19, Air Canada nyere ihe ruru ijeri $ 2.2 na GDP nke BC, kwa afọ. Na mgbakwunye, ugbu a ejikọtara Kelowna na ụlọ ọrụ ụgbọ elu anọ niile nke na-ejikọ ndagwurugwu Okanagan ozugbo na netwọkụ zuru ụwa ọnụ nke Air Canada na nke kachasị, nkwụsị otu.
“Obi dị anyị ụtọ ịmalite naanị ọrụ na-adịghị akwụsị akwụsị n'etiti Montreal na Kelowna, na-ejikọ ụzọ njem njem abụọ na-ewu ewu na-ewu ewu na Quebecers na British Columbians myiri. Flightsgbọ elu ọhụrụ anyị n'ụgbọ Air CanadaA ga-ejikwa ọdụ ụgbọ elu Airbus A220-300 dị jụụ na gburugburu ebe obibi dị mma na njikọta na Atlantic Canada na mba ofesi site na ogige Montreal anyị. Dika obodo a meghere, anyi nwere obi uto inyere ndi enyi na ezinulo aka izukota, ma kwado mmeghari aku na uba nke ndi Canada na ndi njem. Anyị maara na ndị mmadụ nwere ọ toụ ịla njem ọzọ, anyị na-atụkwa anya ịnabata ndị ahịa anyị n'ụgbọ ahụ, "ka Mark Galardo, Onye isi oche Ndị Isi, Network Planning and Revenue Management na Air Canada kwuru.
"Onye anyị na-eguzosi ike n'ihe nye Air Canada na-egosipụtakwa ọzọ na ha ji ndị njem anyị kpọrọ ihe na ụzọ ọhụrụ Montreal-Kelowna a," ka Philippe Rainville, Onye isi na CEO nke ADM kwuru. "Site na ọrụ site na YUL Montréal-Trudeau Airport ugbu a belata na nhọrọ njem ka na-ejedebeghị, mgbakwunye nke ebe ezumike Canada ọhụrụ a na-abịa n'oge kwesịrị ekwesị! Nke a bụ ohere dị ukwuu maka ndị Quebecers ịchọpụta ọmarịcha ịma mma nke Western Canada na nchekwa zuru oke, na ọgbọ ọhụrụ Airbus A220-300 ụgbọ elu, nke dị jụụ ma zukọta na Mirabel (YMX), yana etu esi eme obodo. Anyị enweghị ike ịrịọ maka ihe ọzọ! ”
"Ọrụ nke Canada na-enweghị nkwụsị Montreal-Kelowna na-egosi nnukwu ihe ịrịba ama maka YLW iji weta njem n'etiti Quebec na mpaghara Okanagan," ka Sam Samaddar, Director Airport, YLW - Kelowna International Airport kwuru. "Montreal abụwo mpaghara dị mkpa maka njem na Okanagan ma anyị arụ ọrụ ọtụtụ afọ iji nweta njikọ obodo a. Ana m atụ anya ị nabata ndị bi na Quebec na ndị na-esite na Montreal banye na paradaịs anyị nwere oge anọ. ”
Ellen Walker-Matthews, SR VP na Onye isi oche na onye isi oche maka Thompson Okanagan Tourism Association kwuru, sị, "Obi dị anyị ụtọ ịhụ ụgbọ elu ọhụrụ a sitere na Montreal banye Kelowna na-emepe ohere dị ukwuu maka njem ụlọ na mpaghara Thompson Okanagan." "Anyị na-achọpụta ọtụtụ ịrị elu nke Quebec n'ime ọnwa ole na ole gara aga site na ịjụ ajụjụ site na njem azụmahịa, mgbasa ozi njem na onye ọ bụla na ọrụ ọhụrụ a ga-enyere aka igboju ma too nke a."
Air Canada's Airbus A220-300 gosipụtara oche oche 12 nke Azụmaahịa na oche oche akụ na ụba 125 nwere nkwalite ikuku ụgbọ elu n'oche ọ bụla n'ụgbọ elu ahụ. Ndị ahịa nwere ohere onwe ha karịa n'ihi oche oche akụ na ụba kachasị na ụgbọ mmiri, yana nnukwu bowes bow maka ụgbọ elu nke a. Akụkụ ndị ọzọ gụnyere windo buru ibu na agba agba agba agba agba gburugburu na nke nwere ike ime ka ọ belata ike ọgwụgwụ mgbe ị na-eme njem. Uko ụlọ elu dị elu, ime ụlọ ubu na nchekwa na-eme ka ụgbọ elu a bụrụ ihe na-enweghị atụ n'ime akụkụ ahụ dị warara.
A220 na - enyere aka itinye aka ikuku ikuku ikuku nke Canada na 2050 site na injin ya turbofan a na - atụ anya na ọ ga - eweta ihe ruru pesenti 25 na mmanụ ọkụ n’otu oche. A220 bụkwa ụgbọ elu dị jụụ na ụdị ya. Guo mpempe akwụkwọ Air Canada Airbus A220 maka ama ndị ọzọ.
Ugbo elu ụgbọ elu nke Air Canada niile na-enye maka mkpokọta Aeroplan na mgbapụta yana, maka ndị ahịa tozuru etozu, ịnweta ọrụ ndị kacha mkpa, Ulo Oru Maple na uru ndị ọzọ.
F ìhè R oute D akwụkwọ
Time Aircraft Ofbọchị Ọrụ
AC365 Montreal na Kelowna 19: 05 21: 35 Airbus A220-300 Mon, Tọz, Fraị, Sat, Sun
AC364 Kelowna ke Montreal 10: 00 17: 30 Airbus A220-300 Mon, Tues, Fraị, Sat, Sun